Bobabini indoda yaseCancer kunye nomfazi we-Aquarius zipholile ngothando ekuqaleni. Kodwa indoda yeCancer iyenzela nje ukuzenza nje - ukunyaniseka kwakhe kukukhusela ngokuzivelela kakhulu, kungekudala.
Enyanisweni, uloyiko olukhulu lokwesaba ukulimaza, kodwa iindlela ezinobungane zowesifazane onamanzi zinceda ukudala isikhala sokubamba iqhosha lomntu weCrab kufuneka livule.
Amanye ama- Aquarian azintombi anesimo esingenakufumaneka.
Enye into ngokuqinisekileyo - ama-Aquariya abathanda inkululeko yabo! Ukuba umfana weCancer uyawa, uya kufuna ukumbamba iingalo zakhe ezinkulu-kwaye akayekanga. Nangona kunjalo, ulwalamano lunokungena ngasemzantsi ngokukhawuleza ukuba unamathela kakhulu.
I-Cancer ngothando iyakhusela kwaye ngaphezulu ekhaya kwiindawo ezikhuselekileyo, njengendoda yakhe.
U-Aquarius othandweni ufuna iindawo ezininzi zokuphefumula.
Indlela Ekhawuleza Yentliziyo
Kumfazi wase-Aquarius, kungengqondo engaphezulu. Umlawuli wePlanethi ye-Sun nguUranus, octave ephakamileyo yomthunywa weMercury. Uza kuphila kwiingxoxo ze-buzzy okanye ekuchaseni isiqhelo. Uyanconywa ngcamango yokuqala kunye nomnqweno wezizathu eziphezulu. Ukuba ungumthambethi, kwaye uyakuthanda isitayela sakho, oko kukudibanisa ngokucacileyo. Uhlala ekhaya ngokudibanisa okungaqhelekanga kwabantu, kwaye wakhwela kwiimimandla ezingavamile, ukusuka kwibhardi yokudiba ukuya kwindawo ephakamileyo yokunyuka. Ukubeka nje, uthanda ukuphuma kwaye malunga.
Intliziyo yomntu weCancer ivula ngokunyamekela - njengokutya okulungiselelwe ngokucokisekileyo kunye nokuqonda kwengqondo.
Uya kuxabisa ukuthinteka okuchukumisayo njengemithwalo epholileyo, i-slippers efudumeleyo, kunye nosawoti wokuhlamba. Mthobhise iifilimu ezivela entliziyweni, umculo ohambisa umphefumlo, kunye nesidlo esiphambili sesibini. Usemandleni akhe kwiindawo ezingenakudityaniswa, ezingenakuncedwa apho engenanto yokugqithisa umthwalo kwaye uthanda ukuhlala ekhaya kunabo bonke.
Xa uthando lweBlooms
Umfana weCancer uvakalelwa enyanzelweni.
Ibhinqa lamanzi lifumana ukukhuthazwa kokudala kunye nengqiqo.
Umntu weCancer unomqolomba wakhe wokuzolalisa amanzi akhe.
I-Aquarius gal ikhululekile ukuba isebenze ngomoya - ichitha ixesha elininzi kunye nabahlobo kunye nabahlobo.
Uthando lukhula xa kukho ukulinganisela phakathi kokuhlala ekhaya kunye kunye nexesha kunye nabahlobo.
Ezinye iingcamango zikwacetyiswa apha, ukuwanelisa iimfuno zinyani zomnye.
Emva kwexesha elithandanayo, ukuba umntu weCancer uyaqiniseka ukuba uya kufuna ukubiza ibhinqa lakhe. Ukuba ngumqondiso wokukhawuleza, i-Cancer yindoda ifanelekile, kodwa iyonwabile kwindlu yakhe engcwele. Ezinye iCancer ziyi-culture-minded and crave the experience of having a family with kids. Umntu weCancer ukhanyisa indima kayise, efuna ukuba akhulise kwi-DNA yakhe yeenkwenkwezi.
Umntu onqabileyo uthanda ingubo yentloko yendlu. Kwabase-Aquariya abathile, ukuxhatshazwa kovakalelo akukhona apho bahlala khona ekhaya. Kodwa owesifazane ongumAgasti onamanye amaplanethi kwimimandla yamanzi, ingakumbi ukuba iNyanga, i-Ascendant okanye i-Venus, i-sympatico. Kufuneka ulungelelaniso oluqinileyo apha, ukuba umntu weCancer anikezele intliziyo yakhe ngokupheleleyo. Ingoku kungabonakaliyo okwangoku okanye akukho - I-Cancer ibonakaliso lwamanzi (ukuziva) kunye no-Aquarius uphawu lwomoya (ukucinga).
Uninzi lweempawu zomoya ziziva zikhuselekile xa kunesimo sengqondo esifanayo, kunye nemiva yesikolo. Kukho umxube wokunqoba apha, ukukwenza ngeentlobo ezahlukeneyo. Kodwa ukuba bobabini bafuna ukuthoba i-gap, kunokukwenziwa!
I-Cancer ilahlekelwa ngcamango engqondweni , ingaboni kwintliziyo engaphandle.
U-Aquarius naye unqamle kwaye unenjongo - ukuyisebenzisa njengendlela yokuphepha ukulwa nomntu omnye.
Ibhinqa indoda kunye ne-Aquarius ibhinqa ziyaziwa ngokungahambi kakuhle - Ingqondo yengqondo kunye ne-Aquarius ngengqondo. Bobabini banomdla wokuba bahlanya baze balahleke kwihlabathi labo. Ungumkhweli wokutshitshisa, kwaye uzimeleyo ngokuzimeleyo. Ukuba le nto ivakalelwa kwi-Crab yindoda, iyakwazi ukuvalela.
Olunye uthando oludala kunye nokuqonda luya kude: Ukuba kukho ukuzinza ekhaya kunye nokuzibophelela kuyinqanawa, ukuba nomqondo wokubambisana ngenjongo yokutywina idibanisa.
I-Virgo neePisces Uthando olufanelekileyo
Indlela yokubala Ukunciphisa umonakalo weMveliso yeChimicals